Bye Bye OLE - Manchester United Oo Wada-hadallo La Bilowday Mauricio Pochettino Iyo Shuruud Uu Soo Dhigay Oo Jawaabteeda La Sugayo - Gool24.Net
Bye Bye OLE – Manchester United Oo Wada-hadallo La Bilowday Mauricio Pochettino Iyo Shuruud Uu Soo Dhigay Oo Jawaabteeda La Sugayo
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa wada xaajood la bilowday macallinkii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino, kaas oo ay doonayso inuu xilka kala wareego Ole Gunnar Solskjaer oo ku dhibaataysan Old Trafford.
Pochettino oo ay da’diiisu tahay 47 sannadood ayaa si weyn loola xidhiidhinayey Manchester United tan iyo markii laga eryey Tottenham bishii November, laakiin wararka xanta ah ee ku xidhaya United way ka horreeyeen waqtigaas, waxaana suuqa soo gashay in Pochettino uu Red Devills iman doono markii Jose Mourinho uu ka tegay Old Trafford ee sida ku-meelgaadhka ah loogu magacaabay Ole Gunnar Solskjaer.
Laakiin Manchester United ayaa dooratay inay si rasmi ah xilka ugu dhiibto Solskjaer oo waqti fiican kula bilowday, ka hor intii aanu xili ciyaareedkan gelin qalalaase guulo la’aan ah.
Sida uu qoray wargeyska Alfredo Pedulla ee kasoo baxa waddanka Talyaaniga, Manchester United waxay dhowaan bilowday wada-hadallo meel fiican maraya oo ay kula jirto Mauricio Pochettino, hase yeeshee tababaraha reer Argentine ayaa hor dhigay shuruud adag oo ku saabsan suuqa iibka ciyaartoyga oo uu doonayo in isaga loo madax-banneeyo in uu keensan karo ciyaartoyga uu doono.
Pochettino waxa uu u sheegay masuuliyiinta Manchester United in aanu ogolaan karin in laga xaddido go’aamada suuqa iyo ciyaartoyga imanaya, taas oo uu doonayo inuu kaga badbaado caqabaddii ku haleeshay Tottenham oo aanu wax saamayn ah ku lahayn ciyaartoyga la keenayo iyo kuwa la fasaxayaba oo go’aanka uu iska lahaa guddoomiye Daniel Levy.
Manchester United waxay hoosta ku haysataa liis kale oo tababareyaal waqtigan madax-bannaan ah oo ay dhinacooda u jeedsan doonto haddii ay fashilmaan wada-hadallada Pochettino, waxaana ka mid ah macallinkii hore ee Juventus ee Max Allegri.
Si kastaba ha ahaatee, shaqada Ole Gunnar Solskjaer ayaa si degdeg ah usoo dhamaan karta haddii Red Devils ay guulo ka keeni weydo ciyaarteeda caawa iyo kulamada soo aaddan.